☁ Okwu nke June | Network Meteorology
Oge na-aga ngwa ngwa ngwa ngwa oge ụfọdụ, ruo n'ókè nke na ọnwa isii nwere ike ịgafe na-enweghị amata ya. Yabụ, dị ka a ga-asị na ọ bụ ntabi anya, anyị abanyelarị June, n’ọnwa nke isii n’afọ. Ọ dị ka ihe ịtụnanya na n’enweghị ihe gara aga anyị chebere onwe anyị pụọ n’oge oyi, ma ugbu a anyị ga-amalite oge ọkọchị, oge kachasị ekpo ọkụ.
Enwere ọtụtụ okwu June, ha niile na-atọ ụtọ ma na-achọsi ike. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ha, echefula ihe a puru iche na nke, na mgbakwunye, m ga-agwa gị ihe ọnwa a ga-echere anyị maka okpomọkụ na mmiri ozuzo.
1 June, ọnwa mbụ nke okpomọkụ okpomọkụ
2 Okwu ọnwa June na ihe ha pụtara
June, ọnwa mbụ nke okpomọkụ okpomọkụ
June bụ ọnwa nke ọnwa kachasị dị ala ma nwee oke okpomọkụ ha na-amalite ibili nke ukwu, karịsịa na etiti na mpaghara Mediterenian nke mba ahụ, ebe ụkpụrụ dị ugbu a n'etiti 20 na 30º (ma ọ bụ karịa n'akụkụ ụfọdụ nke ndịda nke mpaghara Iberian Peninsula). Na ndị ọzọ, Mercury na temometa na-anọ gburugburu 15 na 25ºC.
Ọnwa a dị ezigbo jụụ n’ọtụtụ obodo, mana ọ na-ekpo ezigbo ọkụ n’ebe ụfọdụ, dịka anyị hụworo. Iji nye anyị echiche, na June 2015 anyị nwere nkezi okpomọkụ nke 22,5ºC (nwere oge ntụgharị: 1981-2010), nke bụ 1,4º karịa ka ọ dị na mbụ. N'ọtụtụ ebe, ihe ọkụ ọkụ karịrị 2ºC, dịka ọmụmaatụ n'akụkụ ụfọdụ nke etiti na akụkụ ọdịda anyanwụ nke peninshula, dị ka ị pụrụ ịhụ na foto a:
Banyere mmiri ozuzo, anyị na-echekarị na ọ bụ ọnwa kpọrọ nkụ, mana eziokwu bụ na dabere na ebe ino ọ nwere ike izo mmiri karịa, ma ọ bụ pekarịa. Dịka ọmụmaatụ, ma na-aga n'ihu na ihe atụ nke June 2015, obodo ebe mmiri kacha zoo bụ ndị dị n'etiti na ugwu ọwụwa anyanwụ nke peninshula ahụ, ebe ndị ọzọ mmiri ozuzo dị ala, ruo n’ókè nke na e nwere ógbè ụfọdụ nke mmiri na-ezoghị na ha, dị ka ọ dị na Canary Islands. Lee ị nwere ike ịhụ onyonyo nke AEMET:
Ọ bụ ezie na ọ bụ ọnwa dịkarịa ala ma ọ bụ karịa, ị maara ihe ha na-ekwu »rue May 40 ewepụla akwa mkpuchi gị», Ma ọ bụ na enwere ike inwe mmiri ozuzo site n'oge ruo n'oge, nke nwere ike isoro obere mmiri (na nkenke) na ọnọdụ okpomọkụ. Ma olee okwu ndị ọzọ dị maka ọnwa June?
Okwu ọnwa June na ihe ha pụtara
Ezi ihu igwe na June, okpomọkụ n'ezie: N’ọnwa a, oge ọkọchị ga-amalite, oge kacha ekpo ọkụ n’ime afọ.
Ihe na-ada mmiri na June dries na June: na-ezo aka na mmiri ole na ole na-ezokarị.
Ọ bụrụ na mmiri zoro nke ọma na Mee, kpọnwụọ ruo June ka ọ wepụtara: Ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na mmiri zoo na Mee, June bụ ọnwa akọrọ.
Mmiri June mbụ, nnukwu ihe ngwọta: Mmiri ozuzo na mbido ọnwa ahụ bara ezigbo uru, n’ihi na ọ ga-enyere ihe ọkụkụ aka ito ma mịa mkpụrụ n’ụzọ ziri ezi.
June na mmiri mbụ na-ezo, na-ekwupụta oge ọkọchị: ọdịda ndị dara na ọnwa a bụ ọkwa nke oge okpomọkụ nke okpomọkụ ga-adị oke elu.
June, ma ọ bụ oké ọkọchị, ma ọ bụ idei mmiri: ọnwa a nwere ike ịbụ ezigbo akọrọ ma ọ bụ oke mmiri mmiri, ọ dịghị etiti dị n'etiti.
Oké ifufe June na-ada dị ka ọkpọ: enwere ike inwe oke ifufe mgbe ụfọdụ, ya na mmiri ozuzo na akụ mmiri igwe.
Anwụ na-acha na-enwu gbaa June, na-etinye gị na ọnọdụ dị mma: Ka ụbọchị na-akawanye, ọnọdụ ndị mmadụ na-akawanye mma, ebe anyị nwere ike ịnụ ọkụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 15.
Ka ọ na-erule June, ihu igwe dị ọkụ anaghị emenye onye ọrụ ugbo ụjọ: Ọ dịghị ọnwa dị mma maka ịrụ ọrụ ugbo karịa June, anwụ na-acha na-ekpo ọkụ.
Mmiri na June abughi nkpuru osisi ma obu ahihia na July Nsogbu mmiri ozuzo na ọnwa a bụ na ha nwere ike imebi ihe ọkụkụ.
Nwere ike ịkpọ nkụ, June mmiri, ihe niile ga-ewe iwe: ọ bụrụ na mmiri anaghị ezo na Mee mana ọ na-ezo na June, ihe ọkụkụ agaghị eto nke ọma.
June 21 dị ka ogologo oge ọ bụla: 21st bụ ụbọchị kachasị ogologo n'afọ, ọ bụ Summer Solstice.
Mmiri maka Saint John na-ewepụ mmanya, mmanụ na achịcha: N'ime izu ikpeazụ nke ọnwa, mmiri nwere ike izo, ndị a bụ mmiri ozuzo nke nwere ike imebi ihe ọkụkụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na Mercury na temometa dị gburugburu 28ºC.
Maka San Julieta, mmiri ozuzo karịa inye na-ewepụ: Santa dị na nke iri na isii, n'oge ahụkwa, ọtụtụ osisi ndị na-akụ mkpụrụ osisi na-achọ ito eto. Ọ bụrụ na mmiri zoo, enwere ike imebi ha.
Gbuo na ụgbọ elu dị ala, na-ekwupụta mmiri ozuzo na mbara igwe: ụmụ ahụhụ nwere nku hygroscopic nke, mgbe ha jupụtara na mmiri, loro na-achọ ha.
Ruo ugbu a, ilu ihu igwe maka ọnwa June. Imaara okwu ndi ozo banyere onwa a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Okwu June